देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिए केहि घण्टा नहुँदै देउवालाई ठुलो झड्का, अब प्रधानमन्त्री बन्न पाउलान कि नपाउलान ? – Khabar Patrika Np
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिए केहि घण्टा नहुँदै देउवालाई ठुलो झड्का, अब प्रधानमन्त्री बन्न पाउलान कि नपाउलान ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: २२:१७:५५
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । लगत्तै विपक्षी गठबन्धनको बैठक कोटेश्वरस्थित नेता नेपालको निवास नजिकै एक संस्थाको कार्यालयमा बसेको थियो ।
‘संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि म गठबन्धनमा आबद्ध भएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै त्यो अध्याय अहिलेका लागि सकिएको छ। हाम्रो पार्टीमा देखिएको विवाद पनि मिल्ने दिशामा गएको छ,’नेपालको भनाइ उदृत गर्दै पन्तले भने,’म अब पार्टी एकताबद्ध गर्ने अभियानमा लाग्छु। त्यसैले मेरो भूमिका समेत अब बदलिन सक्छ। म यो गठबन्धनमा नरहन सक्छु।’
अहिलेसम्म लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफूले साथ दिएको र अहिले परिस्थिती फेरिएकाले गठबन्धनमा रहन नसक्ने जानकारी गराएको नेपाल पक्षीय नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए।
पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनमा रहन नसकिने पन्तले बताए। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीको एकतावद्ध निर्णयबाट गरिने उनले बताए। नेता नेपालले शेरबहादुर देउवालाई सबैलाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरेको पनि पन्तले जानकारी दिए।
त्यस्तै नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले पनि अब गठबन्धनमा आफूहरु नरहने प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा बचाउनुपर्छ भनेर आफूहरु विपक्षी गठबन्धनमा गएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टी एकता र संसद पुनर्स्थापनापछि गठबन्धन असान्दर्भिक भइसक्यो । अब हामी विपक्षी गठबन्धनमा रहँदैनौं ।’तर सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएकै दिन माधव नेपाल समूह अलग भएको छ । यससँगै विपक्षी गठबन्धन संसदमा अल्पमतमा देखिएको छ ।